April 2020 - ShwengweGames
ခံတှငျးအနာ အပူကနျနာမြား အတှကျဆေးနညျးကောငျးတလကျ
April 30, 2020 by Shwengwe Games
အားလုံးပဲ မင်ျဂလာပါ ခငျဗြ
ပုံမှာ ပွထားတဲ့ အပူအဖု အနာလေးကိုတော့”Canker sore”လို့ ချေါပါတယျ။ဒီလို အပူနာအဖုမြိုး ကလေးကအစ လူကွီးအဆုံး လူတိုငျးခံစားဖူးမှာပါ..
ဒီအနာဖုဟာ လြှာအောကျ သှားဖုံးနှငျ့အောကျနုတျခမျးအတှငျးထဲ၌ အဖွဈမြားပါတယျ။အနာအဖုဟာ သေးငယျပမေဲ့ အလှနျနာကငျြပွီး ခံစားရခကျပါတယျ။
သူ့ကို ပြောကျကငျးဖို့ဆိုရငျ ကြှနျတျော တဈခုတညျးသော ဆေးနညျးကိုသာ ပေးပါ့မယျ။အင်ျဂလိပျလို Alum”လို့ချေါပါတယျမွနျမာလိုက ‘ကြောကျခဉျြ’ဖွဈပါတယျ။
ကြောကျခဉျြဟာ ဒီအနာအတှကျ စက်ကနျ့ပိုငျးအတှငျးမှာပဲ သကျသာအောငျ ကုသပေးနိုငျပါတယျ။
ကြောကျခဉျြကို ရှေးစခေ့နျ့ ဖဲ့ခွှပွေီး အနာပျေါတငျပေးထားပါ။သိပျအကွာကွီး ထားစရာမလိုပါဘူးစက်ကနျ့(၆၀)လောကျဆိုရငျ ရပါပွီ။
စက်ကနျ့(၆၀)လောကျတငျထားပွီးပါက ကြောကျခဉျြရော တံတှေးရော ထှေးထုတျလိုကျပါ..ခကျြခွငျးသကျသာသှားပါလိမျ့မယျ။ကြေးဇူးတငျပါတယျ..ကြှနျတျော ဘဝခါးခါးပါ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျ..
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အပူအဖု အနာလေးကိုတော့”Canker sore”လို့ ခေါ်ပါတယ်။ဒီလို အပူနာအဖုမျိုး ကလေးကအစ လူကြီးအဆုံး လူတိုင်းခံစားဖူးမှာပါ
ဒီအနာဖုဟာ လျှာအောက် သွားဖုံးနှင့်အောက်နုတ်ခမ်းအတွင်းထဲ၌ အဖြစ်များပါတယ်။အနာအဖုဟာ သေးငယ်ပေမဲ့ အလွန်နာကျင်ပြီး ခံစားရခက်ပါတယ်။
သူ့ကို ပျောက်ကင်းဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော် တစ်ခုတည်းသော ဆေးနည်းကိုသာ ပေးပါ့မယ်။အင်္ဂလိပ်လို Alum”လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုက ‘ကျောက်ချဉ်’ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်ဟာ ဒီအနာအတွက် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သက်သာအောင် ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ချဉ်ကို ရွေးစေ့ခန့် ဖဲ့ခြွေပြီး အနာပေါ်တင်ပေးထားပါ။သိပ်အကြာကြီး ထားစရာမလိုပါဘူးစက္ကန့်(၆၀)လောက်ဆိုရင် ရပါပြီ။
စက္ကန့်(၆၀)လောက်တင်ထားပြီးပါက ကျောက်ချဉ်ရော တံတွေးရော ထွေးထုတ်လိုက်ပါ..ချက်ခြင်းသက်သာသွားပါလိမ့်မယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..ကျွန်တော် ဘဝခါးခါးပါ။
နယူးယောကျတှငျ ကိုဗဈ-၁၉‌ကွောငျ့သဆေုံးခဲ့တဲ့ ဂြူးလူမြိုးဘာသာရေးခေါငျးဆောငျရဲ့ဈာပနမှာ လူစုလူဝေးဖွဈပျေါခဲ့
April 30, 2020 April 30, 2020 by Shwengwe Games
ရာဈဘီခြိုငျမတျဇျ (Rabbi Chaim Mertz) ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွောငျ့သဆေုံးသှားတယျ။သူကထငျရှားကြျောကွားတဲ့ ရဗ်ဗိတဈယောကျပေါ့..။ Hasidic ဩသဒေါကျဈဘာသာရေးခေါငျးဆောငျဖွဈတယျ။
ဘာသာရေးခေါငျးဆောငျ သဆေုံးတော့ နယူးယောကျမွို့တျောဝနျက တားထားတဲ့ကွားက ခေါငျးမာတဲ့ ဘာသာရေးဝငျတှေ ဟာ ထောငျနဲ့ခြီပွီး အသုဘအတှကျ စုရုံးကုနျကွတယျ..။ မြားသောအားဖွငျ့ ဆယျကြျောသကျတှတေဲ့..။
ဒါဟာဂြူးလူမြိုးတှရေဲ့ အသုဘရိုးရာဓလထေုံ့းစံမို့ ဖွဈတယျ..။မနကေ့ (ဗုဒ်ဓဟူးနေ့)မှာ မွို့တျောဝနျ Bill De Blasio de ကလညျး ဗိုငျးရပျဈပြံ့ကုနျမှာစိုးလို့ ဂြူးအသုဘအခမျးအနားကို ဖကျြသိမျးဖို့လုပျတယျ ။
နယူးယောကျရဲ (NYPD) ကျောမရှငျနာ Dermot Shea ကလညျး“ သူတို့တတှေ ကြုပျတို့ ရဲတှကေိုပါအန်တရာယျပေးနတော။ ဒီကိစ်စကို ကနြျောတို့က ဘယျလိုမှ ခှငျ့မပွုနိုငျဘူး”
ထောငျပေါငျးမြားစှာသောလူတှကေို ရဲတှကေ အုပျစုခှဲလိုကျတယျ။ဒီလို ကွီးမားတဲ့ ဂြူးအသုဘအခမျးအနားကို မွို့တျောဝနျက ဖကျြသိမျးတော့ ပွဿနာတှတေကျကုနျတယျ..။
နယူးယောကျနစေ့ဉျသတငျးထဲ အဲဒီဓာတျပုံတှပေါလာတယျ။ Twitter မှာစာတှရေေးကွ၊ ဝဖေနျကွပေါ့..။ ဂြူးတှကေလညျး သူတို့ အသုဘဆကျလုပျဖို့ ပွငျးပွငျးထနျထနျခုခံကာကှယျတယျ။
ဒါဟာ “ မိုကျမဲ ကွမျးတမျးသောခဈြခွငျးမတ်ေတာ လို့ပွောရမလား၊ ဒီစုရုံးမှုကနေ ရလာမယျ့ အန်တရာယျပမာဏက ခနျ့မှနျးတှကျခကျြလို့တောငျမရပါဘူး” ဟု မွို့တျောဝငျ ဒီဘလာစီယိုကပွောတယျ။
ဒီလိုဆကျပွီး ခေါငျးမာနရေငျ ကံမကောငျးအကွောငျးမလှစှာပဲ လူတှထေပျပွီး သကွေရတော့မယျ။နယူးယောကျမှာ လူပေါငျး ၈.၅ သနျးနထေိုငျကွတယျ။ အဲဒီထဲမှာ ၁.၁ သနျးသညျဂြူးလူမြိုးတှဖွေဈတယျ။
အဲဒီထဲမှာမှ ဂြူး လူမြိုး ၇၂၀၀၀ ဟာ နယူးယောကျ၊ ဘရှတျကလငျ၊ ဝီလြံစဘတျမှာနကွေတာ။ အသုဘအခနျးအနားက ဝီလြံစဘတျ မှာပေါ့။
အခုဆို COVID-19 ရောဂါဟာ အမရေိကနျပွညျသူ တဈသနျးကြျောကို ကူးစကျနပွေီ..။ နယူယောကျမွို့မှာပဲ ၃ သိနျးကြျောနပွေီဖွဈတယျ။
ဒါပမေဲ့ ဂြူးလူမြိုးတှကေ နယူးယောကျက ဘရှတျကလငျလမျးတှပေျေါမှ ပခုံးခငျြးယှဉျရပျ၊ အျောငိုကွှေးမွညျတမျးနခေဲ့ကွ..။
COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျဖို့ စညျးမဉျြးတှဟော..
နိုငျငံရေး မဟုတျပါ။ လူမြိုးရေးခှဲခွားတာမဟုတျ၊
ဘာသာရေးဆနျ့ကငျြတာလညျးမဟုတျ၊ကနျြးမာရေးမို့ အားလုံး လိုကျနာသငျ့တဲ့ စညျးမညျြးတှဖွေဈပါတယျ။
ကိုယျ့နိုငျငံမဟုတျလို့၊ ကိုယျယုံကွညျတဲ့ ဘာသာရေးမဟုတျလို့၊ ကိုယျ့လူမြိုးမဟုတျလို့ လဈြလြှူရှုလို့လညျးမရ၊ တရုတျက စခဲ့ပမေဲ့ တဈကမ်ဘာလုံး ပြံ့ခဲ့ပွီမဟုတျလား..။ ဒါ တဈကမ်ဘာလုံး စညျးလုံးမှ အောငျနိုငျမယျ့အရေး..။
Credit မရှမေိုး (ကိုရီးယား) April 30th,2020.
ဧပြီ ၂၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊ နယူးယောက်၊ဘရွတ်ကလင်းမြို့
ရာစ်ဘီချိုင်မတ်ဇ် (Rabbi Chaim Mertz) ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်။သူကထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ရဗ္ဗိတစ်ယောက်ပေါ့..။ Hasidic ဩသဒေါက်စ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် သေဆုံးတော့ နယူးယောက်မြို့တော်ဝန်က တားထားတဲ့ကြားက ခေါင်းမာတဲ့ ဘာသာရေးဝင်တွေ ဟာ ထောင်နဲ့ချီပြီး အသုဘအတွက် စုရုံးကုန်ကြတယ်..။ များသောအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်တွေတဲ့..။
ဒါဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ အသုဘရိုးရာဓလေ့ထုံးစံမို့ ဖြစ်တယ်..။မနေ့က (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)မှာ မြို့တော်ဝန် Bill De Blasio de ကလည်း ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့ကုန်မှာစိုးလို့ ဂျူးအသုဘအခမ်းအနားကို ဖျက်သိမ်းဖို့လုပ်တယ် ။
နယူးယောက်ရဲ (NYPD) ကော်မရှင်နာ Dermot Shea ကလည်း“ သူတို့တတွေ ကျုပ်တို့ ရဲတွေကိုပါအန္တရာယ်ပေးနေတာ။ ဒီကိစ္စကို ကျနော်တို့က ဘယ်လိုမှ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး”
ထောင်ပေါင်းများစွာသောလူတွေကို ရဲတွေက အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်။ဒီလို ကြီးမားတဲ့ ဂျူးအသုဘအခမ်းအနားကို မြို့တော်ဝန်က ဖျက်သိမ်းတော့ ပြဿနာတွေတက်ကုန်တယ်..။
နယူးယောက်နေ့စဉ်သတင်းထဲ အဲဒီဓာတ်ပုံတွေပါလာတယ်။ Twitter မှာစာတွေရေးကြ၊ ဝေဖန်ကြပေါ့..။ ဂျူးတွေကလည်း သူတို့ အသုဘဆက်လုပ်ဖို့ ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံကာကွယ်တယ်။
ဒါဟာ “ မိုက်မဲ ကြမ်းတမ်းသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ လို့ပြောရမလား၊ ဒီစုရုံးမှုကနေ ရလာမယ့် အန္တရာယ်ပမာဏက ခန့်မှန်းတွက်ချက်လို့တောင်မရပါဘူး” ဟု မြို့တော်ဝင် ဒီဘလာစီယိုကပြောတယ်။
ဒီလိုဆက်ပြီး ခေါင်းမာနေရင် ကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပဲ လူတွေထပ်ပြီး သေကြရတော့မယ်။နယူးယောက်မှာ လူပေါင်း ၈.၅ သန်းနေထိုင်ကြတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ၁.၁ သန်းသည်ဂျူးလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။
အဲဒီထဲမှာမှ ဂျူး လူမျိုး ၇၂၀၀၀ ဟာ နယူးယောက်၊ ဘရွတ်ကလင်၊ ဝီလျံစဘတ်မှာနေကြတာ။ အသုဘအခန်းအနားက ဝီလျံစဘတ် မှာပေါ့။
အခုဆို COVID-19 ရောဂါဟာ အမေရိကန်ပြည်သူ တစ်သန်းကျော်ကို ကူးစက်နေပြီ..။ နယူယောက်မြို့မှာပဲ ၃ သိန်းကျော်နေပြီဖြစ်တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂျူးလူမျိုးတွေက နယူးယောက်က ဘရွတ်ကလင်လမ်းတွေပေါ်မှ ပခုံးချင်းယှဉ်ရပ်၊ အော်ငိုကြွေးမြည်တမ်းနေခဲ့ကြ..။
COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ စည်းမျဉ်းတွေဟာ..
နိုင်ငံရေး မဟုတ်ပါ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားတာမဟုတ်၊
ဘာသာရေးဆန့်ကျင်တာလည်းမဟုတ်၊ကျန်းမာရေးမို့ အားလုံး လိုက်နာသင့်တဲ့ စည်းမျည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံမဟုတ်လို့၊ ကိုယ်ယုံကြည်တဲ့ ဘာသာရေးမဟုတ်လို့၊ ကိုယ့်လူမျိုးမဟုတ်လို့ လျစ်လျှူရှုလို့လည်းမရ၊ တရုတ်က စခဲ့ပေမဲ့ တစ်ကမ္ဘာလုံး ပျံ့ခဲ့ပြီမဟုတ်လား..။
ဒါ တစ်ကမ္ဘာလုံး စည်းလုံးမှ အောင်နိုင်မယ့်အရေး..။
Credit မရွှေမိုး (ကိုရီးယား) April 30th,2020.
De Blasio defends ‘tough love’ after breaking up large Jewish funeral crowd
APR 29, 2020 | 4:25 PM
သငျ့ကို အမွနျဆုံး ဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့ (၅)မြိုး
ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးဆိုတာရှိသလို၊ ဆငျးရဲမယျ့နညျးလမျးတှလေညျးရှိပါတယျ။ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကို မသိ သေးသူတှကေဆငျးရဲစမေယျ့နညျးလမျးတှကေိုရအောငျရှောငျရှားလိုကျတာနဲ့ ခမျြးသာမယျ့နညျးလမျးကိုတဈဖကျကနေ ပွနျလညျကငျြ့သုံးရာရောကျစမှောပါ။ အခုဖျောပွပေးမှာကတော့သငျ့ကိုအမွနျဆုံးဆငျးရဲစနေိုငျတဲ့ အမူအကငျြ့(၁၀)မြိုး ဖွဈပါတယျ။ရှောငျရှားကွပါ။
(၁) ကိုယျရှာနိုငျတာထကျ ပိုသုံးရငျ
တဈခြို့တှကေအသုံးနဲ့အဖွုနျး မကှဲကွပါဘူး။တဈခြို့ငှသေုံးအလှနျကွမျးပါတယျ။ ဒီလူတှဟောသခြောပေါကျမခမျြးသာကွဘူးဆိုတာသတိခပျြစခေငျြပါတယျ။ တဈခြို့တှကေကိုယျရှာတာကိုယျသုံးဖို့ပဲဆိုပွီးသဘောထားကာအရမျးကာရော လြှောကျသုံးတတျကွပါတယျ။ရှာနိုငျသလောကျအခြိနျတော့သုံးရဦးမှာပါဘဲ။ မရှာနိုငျတော့ရငျတော့ဆငျးရဲခွငျးဆိုတဲ့ဒဏျကို ခံစားရမှာပါ။
(၂) မလိုအပျသောနရောတှမှော ငှအေသုံးပွုခွငျး
မအပျစပျသောအရာဆိုတာက တဈခါ တလဂေုဏျပကာသနတဈခုအတှကျ ငှေ ကွေးကိုဒလဟောသုံးတာမြိုးပါ။ဥပမာအနနေဲ့မွငျသာအောငျပွောရရငျသုံးနှဈလောကျနလေို့ဖွဈနတေဲ့အိမျကိုသူမြားဆီကနအေကွှေးခံပွီးပွနျဖကျြဆောကျတာတို့ဘာတို့ပေါ့။အကွှေးအတှကျအတိုးက ဆပျနရေလို့အကွှေးနှံနဈနပေါတယျ။ တဈခါတလဘေတျဈကားလောကျနဲ့ သှားလို့ရတဲ့ခရီးကိုရှိုးပဲ့တယျဆိုပွီးတက်ကစီပဲ စီးတဲ့အကငျြ့မြိုးပေါ့။တဈခြို့ကကတြော့ရခေဲသတ်ေတာတဈခုရှိနရေကျနဲ့ နောကျထပျရခေဲသတ်ေတာတဈလုံးထပျဝယျတာမြိုးရှိတတျပါတယျ။အလှနျဈေးကွီးတဲ့အစားအစာတှကေိုပဲနစေ့ဉျလိုလို စားနတောမြိုးပေါ့။တဈခြို့က ငှကေုနျ ကွေးကမြားမှဂုဏျရှိတာလို့ထငျတဲ့သူတှလေညျးရှိပါတယျ။
(၃) တဈယောကျကိုမှ မကူညီဖူးခွငျး
ဒါကလညျးလူမှုရေးဘကျကနကွေညျ့မယျဆိုရငျမဖွဈသငျ့တဲ့ကိစ်စပါ။သငျဟာ ဘယျသူ့ကိုမှလောကျလောကျလားလား မကူညီဖူးဘူး၊အားလုံးကိုအပျေါစီးကနေ ဆကျဆံခဲ့ဖူးသူ၊အကူအညီလာတောငျးသူမှနျသမြှကိုခပျပကျြပကျြခပျရိုငျးရိုငျးပွောပွီးမောငျးထုတျတတျသူဆိုရငျ သငျ ဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာတဈယောကျ ယောကျကသငျ့ကိုလာပွီးကူညီမယျလို့ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့။ဒီတော့လူလောကမှာ နေ ထိုငျမယျဆိုရငျကိုငျးကြှနျးမှီ၊ကြှနျးကိုငျးမှီစိတျဓာတျထားရမှာပါ။
လူတဈယောကျကိုဆငျးရဲတှငျးထဲမှာကွာ ရှညျနဈစတေဲ့အရာကတော့အကွှေးပါဘဲ။လကျရှိအရပျထဲမှာငှတေိုးခြေးစားသူတှနေဲ့သာငှကွေေးကိစ်စအလုပျလုပျပါက အတျောလေးကွောကျစရာကောငျးတာကိုတှရေ့ပါတယျ။တဈခြို့ကလုံးဝမဖွဈသငျ့တဲ့အတိုးနှုနျးနဲ့ ငှတေိုးခြေးစားနတောတှလေညျးရှိပါတယျ။တဈလလြှငျ ငှကေပျြတဈသိနျးမှာအတိုးနှုနျး (၂၅)% ကနအေနိမျ့ဆုံး (၁၀)%အထိ ရှိပါတယျ။ ငှပေမာဏမြားလအေတိုးပျေါအတိုးဆငျ့ပွီးဆငျးရဲတှငျးနဈလပေါဘဲ။ငှကေိုအတိုး နဲ့ယူသုံးတာကလကျတလောအဆငျပွနေိုငျပမေယျ့ရရှေညျမှာအဆငျမပွနေိုငျဘူးဆိုတာကောငျးကောငျးသဘောပေါကျဖို့ လိုပါတယျ။
(၅) လောငျးကစားနဲ့ အပြျောအပါးမကျခွငျး
တဈခြို့တှကေငှစေကွေးစလေးရှငျလာပွီဆိုရငျတဈထိုငျတညျးနဲ့ပိုကျဆံဂဏနျးငါးလုံးလောကျအသာလေးကုနျနိုငျတဲ့ ဘီယာဆိုငျတို့၊ကတေီဗှီတို့၊မာဆကျတို့ကို မကျြစောငျးထိုးခငျြကွပါတယျ။တဈခြို့ကဒီလိုမဟုတျပဲငှမြေောငှနေဲ့လိုကျ-ဆိုပွီး လောငျးကစားကိုဝါသနာထုံကွပါတယျ။ လောငျးကစားဆိုတာဘယျတုနျးကမှ လူကိုသုခတရားတှပေေးစှမျးတာမြိုး မရှိပါဘူး။တဈခြို့အကြိုးပေးတယျဆိုတာ လောလောဆယျကံလိုကျနလေို့ပါ။လောငျးကစားသမားတှအေမြားစုကို ကွညျ့လိုကျပါဘယျသူကလူမှေးလူရောငျ ပွောငျလို့လဲ။ဒီလိုပဲတဈခြို့ကငှရှေငျပွီဆိုရငျမိနျးမဘကျကိုလှညျ့တတျကွပါတယျ။အပြျောအပါးဘကျကိုလှညျ့တတျကွပါတယျ။အဲဒီလိုမိနျးမဆိုတာငှကေ ဘယျခလုတျကိုနှိပျရငျထှကျတယျဆိုတာ သိပွီးသားမိနျးမလညျတှကေမြားပါတယျ။နောကျရောဂါဘယကူးစကျမှုရှိ၊ မရှိကလညျးစိတျမခရြပါဘူး။သငျ့အတှကျ ဆငျးရဲတှငျးနကျစမေယျ့ အမူအကငျြ့တှမေို့ ရှောငျရှားဖို့ လိုပါတယျ။
source : christianpf.com
သင့်ကို အမြန်ဆုံး ဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့် (၅)မျိုး
ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းဆိုတာရှိသလို၊ ဆင်းရဲမယ့်နည်းလမ်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကို မသိ သေးသူတွေကဆင်းရဲစေမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရအောင်ရှောင်ရှားလိုက်တာနဲ့ ချမ်းသာမယ့်နည်းလမ်းကိုတစ်ဖက်ကနေ ပြန်လည်ကျင့်သုံးရာရောက်စေမှာပါ။ အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့သင့်ကိုအမြန်ဆုံးဆင်းရဲစေနိုင်တဲ့ အမူအကျင့်(၁၀)မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်ရှားကြပါ။
(၁) ကိုယ်ရှာနိုင်တာထက် ပိုသုံးရင်
တစ်ချို့တွေကအသုံးနဲ့အဖြုန်း မကွဲကြပါဘူး။တစ်ချို့ငွေသုံးအလွန်ကြမ်းပါတယ်။ ဒီလူတွေဟာသေချာပေါက်မချမ်းသာကြဘူးဆိုတာသတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ တစ်ချို့တွေကကိုယ်ရှာတာကိုယ်သုံးဖို့ပဲဆိုပြီးသဘောထားကာအရမ်းကာရော လျှောက်သုံးတတ်ကြပါတယ်။ရှာနိုင်သလောက်အချိန်တော့သုံးရဦးမှာပါဘဲ။ မရှာနိုင်တော့ရင်တော့ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒဏ်ကို ခံစားရမှာပါ။
(၂) မလိုအပ်သောနေရာတွေမှာ ငွေအသုံးပြုခြင်း
မအပ်စပ်သောအရာဆိုတာက တစ်ခါ တလေဂုဏ်ပကာသနတစ်ခုအတွက် ငွေ ကြေးကိုဒလဟောသုံးတာမျိုးပါ။ဥပမာအနေနဲ့မြင်သာအောင်ပြောရရင်သုံးနှစ်လောက်နေလို့ဖြစ်နေတဲ့အိမ်ကိုသူများဆီကနေအကြွေးခံပြီးပြန်ဖျက်ဆောက်တာတို့ဘာတို့ပေါ့။အကြွေးအတွက်အတိုးက ဆပ်နေရလို့အကြွေးနွံနစ်နေပါတယ်။ တစ်ခါတလေဘတ်စ်ကားလောက်နဲ့ သွားလို့ရတဲ့ခရီးကိုရှိုးပဲ့တယ်ဆိုပြီးတက္ကစီပဲ စီးတဲ့အကျင့်မျိုးပေါ့။တစ်ချို့ကကျတော့ရေခဲသေတ္တာတစ်ခုရှိနေရက်နဲ့ နောက်ထပ်ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံးထပ်ဝယ်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။အလွန်ဈေးကြီးတဲ့အစားအစာတွေကိုပဲနေ့စဉ်လိုလို စားနေတာမျိုးပေါ့။တစ်ချို့က ငွေကုန် ကြေးကျများမှဂုဏ်ရှိတာလို့ထင်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။
ဒါကလည်းလူမှုရေးဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စပါ။သင်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှလောက်လောက်လားလား မကူညီဖူးဘူး၊အားလုံးကိုအပေါ်စီးကနေ ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူ၊အကူအညီလာတောင်းသူမှန်သမျှကိုခပ်ပျက်ပျက်ခပ်ရိုင်းရိုင်းပြောပြီးမောင်းထုတ်တတ်သူဆိုရင် သင် ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာတစ်ယောက် ယောက်ကသင့်ကိုလာပြီးကူညီမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ဒီတော့လူလောကမှာ နေ ထိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုင်းကျွန်းမှီ၊ကျွန်းကိုင်းမှီစိတ်ဓာတ်ထားရမှာပါ။
လူတစ်ယောက်ကိုဆင်းရဲတွင်းထဲမှာကြာ ရှည်နစ်စေတဲ့အရာကတော့အကြွေးပါဘဲ။လက်ရှိအရပ်ထဲမှာငွေတိုးချေးစားသူတွေနဲ့သာငွေကြေးကိစ္စအလုပ်လုပ်ပါက အတော်လေးကြောက်စရာကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ချို့ကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့အတိုးနှုန်းနဲ့ ငွေတိုးချေးစားနေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။တစ်လလျှင် ငွေကျပ်တစ်သိန်းမှာအတိုးနှုန်း (၂၅)% ကနေအနိမ့်ဆုံး (၁၀)%အထိ ရှိပါတယ်။ ငွေပမာဏများလေအတိုးပေါ်အတိုးဆင့်ပြီးဆင်းရဲတွင်းနစ်လေပါဘဲ။ငွေကိုအတိုး နဲ့ယူသုံးတာကလက်တလောအဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့်ရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့ လိုပါတယ်။
(၅) လောင်းကစားနဲ့ အပျော်အပါးမက်ခြင်း
တစ်ချို့တွေကငွေစကြေးစလေးရွှင်လာပြီဆိုရင်တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ပိုက်ဆံဂဏန်းငါးလုံးလောက်အသာလေးကုန်နိုင်တဲ့ ဘီယာဆိုင်တို့၊ကေတီဗွီတို့၊မာဆက်တို့ကို မျက်စောင်းထိုးချင်ကြပါတယ်။တစ်ချို့ကဒီလိုမဟုတ်ပဲငွေမျောငွေနဲ့လိုက်-ဆိုပြီး လောင်းကစားကိုဝါသနာထုံကြပါတယ်။ လောင်းကစားဆိုတာဘယ်တုန်းကမှ လူကိုသုခတရားတွေပေးစွမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။တစ်ချို့အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာ လောလောဆယ်ကံလိုက်နေလို့ပါ။လောင်းကစားသမားတွေအများစုကို ကြည့်လိုက်ပါဘယ်သူကလူမွေးလူရောင် ပြောင်လို့လဲ။ဒီလိုပဲတစ်ချို့ကငွေရွှင်ပြီဆိုရင်မိန်းမဘက်ကိုလှည့်တတ်ကြပါတယ်။အပျော်အပါးဘက်ကိုလှည့်တတ်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုမိန်းမဆိုတာငွေက ဘယ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင်ထွက်တယ်ဆိုတာ သိပြီးသားမိန်းမလည်တွေကများပါတယ်။နောက်ရောဂါဘယကူးစက်မှုရှိ၊ မရှိကလည်းစိတ်မချရပါဘူး။သင့်အတွက် ဆင်းရဲတွင်းနက်စေမယ့် အမူအကျင့်တွေမို့ ရှောင်ရှားဖို့ လိုပါတယ်။
အခကျအခဲ အကွပျအတညျးအမြိုးမြိုးကို ( ၇ ) ရကျအတှငျးလှတျမွောကျစနေိုငျတဲ့ ဂါထာတျော
တနင်ျဂနှနေကေ့နေ စပွီး အဓိဌာနျဝငျပါ။တနင်ျဂနှနေတေ့နင်ျဂနှေ ထောငျ့မတ်ေတာသုတျတျော၆ခေါကျ၊တနင်ျဂနှနေဖှေ့ားမွတျ စှာဘုရားရှငျအပေါငျးကိုရညျမှနျးပွီးကနျ တော့ပါ။
ကွာသပတေးနေ့..စနထေောငျ့.၊မတ်ေတာသုတျတျော၁၀ခေါကျ၊သောကွာနေ့…ဗုဒ်ဓဟူးထောငျ့၊ မတ်ေတာသုတျတျော..၁၇ခေါကျ၊စနနေအေ့င်ျဂါထောငျ့..၊မတ်ေတာသုတျတျော ၈ခေါကျ ၊
ဒီအဓိဌာနျကို တဈကယျအခကျအခဲ ကွုံနသေူမြားသာ လုပျသငျ့ပါတယျ။ (အလုပျ အကိုငျ ပိုမိုကောငျးခငျြလို့ ငှပေိုဝငျခငျြလို့ အစရှိသဖွငျ့လောဘဖွငျ့လုံးဝမလုပျသငျ့ပါ။)
ဟိုတဈခါကြှနျတျောတငျပေးဖူးသညျ့အလုပျအကိုငျရရှိစသေညျ့အဓိဌာနျမြိုးကဲ့သို့ မဟုတျပါ။ အဲဒီ့အဓိဌာနျကတော့ အလုပျမရှိလုိ့ပဲဖွဈဖွဈအလုပျပိုကောငျးခငျြလို့ပဲ ဖွဈဖွဈဝငျနိုငျလကေောငျးလပေါပဲ။
တဈကယျဖွဈခငျြတဈကယျလုပျနိုငျဖို့သာလိုအပျပါကွောငျးအခကျအခဲအကပျြ အတညျးတို့မှလှတျမွောကျကွပါစသေ တညျး။
ဤပညာဒါနကုသိုလျသညျဖွဈလရောဘဝတိုငျးတှငျတပညျ့တျောအားအခကျ အခဲအကပျြအတညျးဆိုကျ ရောကျသညျတိုငျးတှငျမြားမကွာမီလှတျမွောကျစသေညျ့အထောကျအပံ့ကောငျးဖွဈပါစေ..သတညျး။
COVID-19 ဗိုငျးရပျဈ က အမွဈပွတျ ပြောကျကငျးသှားမှာ မဟုတျဘဲ ရာသီပျေါ တုပျကှေးလိုနှဈစဉျနှဈတိုငျးပျေါလာနိုငျ
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈဟာအမွဈပွတျသှားမှာ မဟုတျကွောငျးတရုတျသိပ်ပံပညာရှငျတှကေပွောပွီးဒီဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈတဲ့ COVID-19 ရောဂါဟာတုပျကှေးလိုရာသီပျေါ ရောဂါမြိုးနှဈစဉျကွုံရနိုငျတယျလို့ကမ်ဘာတဈဝနျးထငျမွငျယူဆခကျြတှကေို အားဖွညျ့ပေးလိုကျပါတယျ။အခြိုဗိုငျးရပျဈ ကူးစကျသူ့မှာဖြားတာလို့ထငျသာမွငျသာလက်ခဏာတှမေပွဘဲဗိုငျးရပျဈသယျဆောငျထားသူတှဖွေဈနတောကွောငျ့ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၇ နှဈက ပျေါပေါကျခဲ့သညျ့ ၎င်းငျးရဲ့ နီးစပျသောမြိုးကှဲ SARS လိုမြိုးကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကပြောကျကှယျသှားဖို့ မရှိပါဘူး။
ရောဂါလက်ခဏာမပွတဲ့ဗိုငျးရပျဈသယျ ဆောငျအုပျစုကွောငျ့ အခွားသူမြားဆီ စဈဆေးတှရှေိ့ခွငျးမရှိဘဲ ဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့စမှောကွောငျ့ကူးစကျမှုကိုလုံးလုံး ထိနျး ခြုပျဖို့ကတော့ခကျခဲတယျလို့ တရုတျ ပိုးမှားနှငျ့ဆေးဝါးသုတသေနပညာရှငျအဖှဲ့ကပကေငျြးကသတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာပွောပါတယျ။ SARS ရောဂါကတော့ကူးစကျဖွဈပှားသူဟာ အပွငျးအထနျ နာမကနျြးဖွဈပွီး ရောဂါဖွဈသူကိုအခွားသူတှနေဲ့ ခှဲထားပွီး ဗိုငျးရပျဈ ပြံ့နှံ့မှုရပျတနျ့နိုငျခဲ့တာပါ။ဒါပမေယျ့ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈကတော့ ဆနျ့ကငျြဖကျဖွဈပွီးတရုတျနိုငျငံအတှငျး ကူးစကျဖွဈပှားရာဒသေတှကေို ထိနျးခြုပျထားပမေယျ့လညျးရောဂါလက်ခဏာ မပွတဲ့ ဗိုငျးရပျဈကူးစကျသူတှကေိုနစေ့ဉျနှငျ့အမြှတှနေ့ရေတုနျးဖွဈပါတယျ။
“လူတှကွေားထဲမှာကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ ကွာရှညျတညျရှိသှားမှာက ဖွဈနိုငျခွေ အတျောမြားတယျ။ရာသီပျေါ ရောဂါဖွဈလာပွီးလူတှရေဲ့ခန်ဓာကိုယျမှာတှယျရှိနနေိုငျတယျ။”လို့ တရုတျထိပျတနျးဆေးဝါးသုတသေနဌာန Chinese Academy of Medical Sciences က ရောဂါပိုးမှားဇီဝဗဒေသိပ်ပံရဲ့ ညှနျကွားရေးမှူးကငျြးခြိကပွောပါတယျ။တဈကမ်ဘာ့လုံးက စီးပှားရေးကွီးရပျတနျ့သှားစတေဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကွီးတဲ့ lockdown ခတြာတှေ လုပျဆောငျနပေမေယျ့လညျးဗိုငျးရပျဈကိုအမွဈဖွတျနိုငျဖို့တော့မရှိဘူးလို့ ထိပျတနျးသုတသေီတှနေဲ့ ကမ်ဘာ့အစိုးရအမြားစု ယူဆထားပါတယျ။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် က အမြစ်ပြတ် ပျောက်ကင်းသွားမှာ မဟုတ်ဘဲ ရာသီပေါ် တုပ်ကွေးလိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပေါ်လာနိုင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာအမြစ်ပြတ်သွားမှာ မဟုတ်ကြောင်းတရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပြောပြီး ဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ COVID-19 ရောဂါဟာတုပ်ကွေးလို ရာသီပေါ် ရောဂါမျိုးနှစ်စဉ်ကြုံရနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို အားဖြည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အချိုဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ့မှာဖျားတာလို့ထင်သာမြင်သာလက္ခဏာတွေမပြဘဲ ဗိုင်းရပ်စ် သယ်ဆောင်ထားသူတွေဖြစ်နေတာကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၇ နှစ်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ၎င်းရဲ့ နီးစပ်သောမျိုးကွဲ SARS လိုမျိုးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကပျောက်ကွယ်သွားဖို့ မရှိပါဘူး။
ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သယ် ဆောင်အုပ်စုကြောင့် အခြားသူများဆီ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲ ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့စေမှာကြောင့်ကူးစက်မှုကိုလုံးလုံး ထိန်း ချုပ်ဖို့ကတော့ခက်ခဲတယ်လို့ တရုတ် ပိုးမွှားနှင့်ဆေးဝါးသုတေသနပညာရှင်အဖွဲ့ကပေကျင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါတယ်။ SARS ရောဂါကတော့ကူးစက်ဖြစ်ပွားသူဟာ အပြင်းအထန် နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ရောဂါဖြစ်သူကိုအခြားသူတွေနဲ့ ခွဲထားပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ပျံ့နှံ့မှုရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမယ့် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကတော့ ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံအတွင်း ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာဒေသတွေကို ထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်လည်းရောဂါလက္ခဏာ မပြတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူတွေကိုနေ့စဉ်နှင့်အမျှတွေ့နေရတုန်းဖြစ်ပါတယ်။
“လူတွေကြားထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကြာရှည်တည်ရှိသွားမှာက ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော်များတယ်။ရာသီပေါ် ရောဂါဖြစ်လာပြီးလူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတွယ်ရှိနေနိုင်တယ်။”လို့ တရုတ်ထိပ်တန်းဆေးဝါးသုတေသနဌာန Chinese Academy of Medical Sciences က ရောဂါပိုးမွှားဇီဝဗေဒသိပ္ပံရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူးကျင်းချိကပြောပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာ့လုံးက စီးပွားရေးကြီးရပ်တန့်သွားစေတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုကြီးတဲ့ lockdown ချတာတွေ လုပ်ဆောင်နေပေမယ့်လည်းဗိုင်းရပ်စ်ကို အမြစ်ဖြတ်နိုင်ဖို့တော့မရှိဘူးလို့ ထိပ် တန်းသုတေသီတွေနဲ့ ကမ္ဘာ့ အစိုးရ အများစု ယူဆထားပါတယ်။
COVID-19 ကာအတှငျးမှာ ဈေး ရောငျး ရငျးအပိုဝငျငှရှောနကွေတဲ့အနုပညာရှငျမြား
အခုလို Covid-19 ကာလမှာတော့ ရော ဂါပိုးပွနျ့ပှားမှုကို ထိနျးခြုပျကနျ့သတျနိုငျဖို့အတှကျ Stay Home ကာလအဖွဈသတျမှတျထားပွီးလုပျငနျးတျောတျောမြားမြားရပျနားထားရပါတယျ။အခုလိုအိမျမှာနရေတဲ့အခြိနျမှာလူတျောတျောမြားမြားကိုယျတိုငျလညျးခကျြပွုတျ စား ကျရငျးအပိုဝငျငှရေအောငျအစား အသောကျတှခေကျြပွုတျရောငျးခလြာတာကိုတှမွေ့ငျရမှာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ အနုပညာရှငျအခြို့လညျးပါဝငျလာပါတယျ။ သူတို့တှကေတော့
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောမငျးသားခြောကွီး ညီနန်ဒကတော့ စပါယျရှယျထောပတျထမငျးကို ရောငျးခပြေးနပွေီး ထောပတျထမငျးနဲ့တှဲဖကျစားဖို့ကွကျသားဟငျးကိုလညျးဗမာကွကျကိုမှသခြောဒိနျခဉျြနဲ့နှယျပွီးမှခကျြပွုတျထားတာဖွဈပွီး တဈပှဲ(၃၅၀၀)ကပျြနဲ့ ရောငျးခပြေးနပေါ တယျ။
သူကတော့ဝကျနဲ့ပတျသကျပွီး စပါယျရှယျရောငျးခနြသေူပါသင်ျကွနျမတိုငျခငျကာလကတညျးကဝကျနံရိုးမီးတောကျရောငျးခခြဲ့ပွီးအခုဆိုရငျတော့ပှငျ့နဒီမောငျနဲ့ပေါငျးကာ Menu အသဈတှထေပျထုတျထားတာမို့ ဝကျလကျရှယျပေါငျး၊ဝကျနံရိုးအခြိုပေါငျးတို့ပါအားပေးနိုငျ ပွီဖွဈပါတယျ။ ဈေးနှုနျးကတော့ တဈပှဲကို တဈသောငျးခှဲဖွဈပွီး သောကွာ၊စနနေဲ့ တနင်ျဂနှနေေ့ သုံးရကျပဲရောငျးခပြေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
သူကတော့ထူးခွားရဲ့ညီအရငျးဖွဈပွီး အဈကိုဖွဈသူလိုပဲ Stay Home ကာလစတငျကတညျးကအစားအသောကျတှရေောငျးခနြသေူပါ။သူကတော့ကိုရီးယားကွကျကွျောရိုးရိုးနဲ့ မာလာကွ ကျကွျောကိုပှဲသေး(၅၀၀၀)၊ပှဲကွီး(၈၀၀၀)နဲ့ ရောငျးခပြေးနတောပါ။ စှဲစှဲလနျးလနျးယိုစုံသုပျကိုလညျးတဈပှဲ(၃၅၀၀)နဲ့ ရောငျးခပြေးပါသေးတယျ။
သုသုကတော့သရကျသီးရာသီရောကျပွီမို့သရကျသီးတှကေိုယျတိုငျပို့ကာ ရောငျး ခနြပွေီးဆေးသုံးပွီးကွီးအောငျမလုပျထားတဲ့ အပြိုစငျခွံထှကျစိနျတဈလုံးသီးတှကေို (၈၀၀)(၁၀၀၀)ကပျြ၊အစိမျးစားသရကျသီးတှကေို တဈလုံး(၁၀၀၀) ကပျြနဲ့ ရောငျးခပြေးနပေါတယျ။
သူတို့တှကေတော့အခုလို Covid-19 ကာလမှာဈေးရောငျးရငျးဝငျငှရှောနကွေတဲ့အနုပညာရှငျတှပေဲဖွဈပါတယျ။ ဆယျလီကမ်ဘာပရိသတျကွီးထဲမှာရော Covid-19 ကာလမှာအစားအသောကျရောငျးရငျးဝငျငှရှောနတေဲ့သူတှရှေိလား။
Source – Nyi Nanda, Htoo Char, Min Taw Win, Nyi Nyi Maung
Rainbow- Cele Gabar,Reference&Credit:Celegabar.com
COVID-19 ကာအတွင်းမှာ ဈေး ရောင်း ရင်းအပိုဝင်ငွေရှာနေကြတဲ့အနုပညာရှင်များ
အခုလို Covid-19 ကာလမှာတော့ ရော ဂါပိုးပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်ဖို့အတွက် Stay Home ကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးလုပ်ငန်းတော်တော်များများရပ်နားထားရပါတယ်။အခုလိုအိမ်မှာနေရတဲ့အချိန်မှာလူတော်တော်များများကိုယ်တိုင်လည်းချက်ပြုတ် စား က်ရင်းအပိုဝင်ငွေရအောင်အစား အသောက်တွေချက်ပြုတ်ရောင်းချလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာတော့ အနုပညာရှင်အချို့လည်းပါဝင်လာပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့
ပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်မင်းသားချောကြီး ညီနန္ဒကတော့ စပါယ်ရှယ်ထောပတ်ထမင်းကို ရောင်းချပေးနေပြီး ထောပတ်ထမင်းနဲ့တွဲဖက်စားဖို့ကြက်သားဟင်းကိုလည်းဗမာကြက်ကိုမှသေချာဒိန်ချဉ်နဲ့နှယ်ပြီးမှချက်ပြုတ်ထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ပွဲ(၃၅၀၀)ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေးနေပါ တယ်။
သူကတော့ဝက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စပါယ်ရှယ်ရောင်းချနေသူပါသင်္ကြန်မတိုင်ခင်ကာလကတည်းကဝက်နံရိုးမီးတောက်ရောင်းချခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်တော့ပွင့်နဒီမောင်နဲ့ပေါင်းကာ Menu အသစ်တွေထပ်ထုတ်ထားတာမို့ ဝက်လက်ရှယ်ပေါင်း၊ဝက်နံရိုးအချိုပေါင်းတို့ပါအားပေးနိုင် ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းကတော့ တစ်ပွဲကို တစ်သောင်းခွဲဖြစ်ပြီး သောကြာ၊စနေနဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ သုံးရက်ပဲရောင်းချပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ထူးခြားရဲ့ညီအရင်းဖြစ်ပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူလိုပဲ Stay Home ကာလစတင်ကတည်းကအစားအသောက်တွေရောင်းချနေသူပါ။သူကတော့ကိုရီးယားကြက်ကြော်ရိုးရိုးနဲ့ မာလာကြက်ကြော်ကိုပွဲသေး(၅၀၀၀)၊ပွဲကြီး(၈၀၀၀)နဲ့ ရောင်းချပေးနေတာပါ။စွဲစွဲလန်းလန်းယိုစုံသုပ်ကိုလည်းတစ်ပွဲ(၃၅၀၀)နဲ့ ရောင်းချပေးပါသေးတယ်။
သုသုကတော့သရက်သီးရာသီရောက်ပြီမို့သရက်သီးတွေကိုယ်တိုင်ပို့ကာ ရောင်း ချနေပြီးဆေးသုံးပြီးကြီးအောင်မလုပ်ထားတဲ့ အပျိုစင်ခြံထွက်စိန်တစ်လုံးသီးတွေကို (၈၀၀)(၁၀၀၀)ကျပ်၊ အစိမ်းစားသရက်သီးတွေကို တစ်လုံး(၁၀၀၀)ကျပ်နဲ့ ရောင်းချပေးနေပါတယ်။
သူတို့တွေကတော့အခုလို Covid-19 ကာလမှာဈေးရောင်းရင်းဝင်ငွေရှာနေကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်လီကမ္ဘာပရိသတ်ကြီးထဲမှာရော Covid-19 ကာလမှာအစားအသောက်ရောင်းရင်းဝင်ငွေရှာနေတဲ့သူတွေရှိလား။
အိုသှေးပိုငျရှငျတှဟော သူတပါးကို ကူညီရတာကို ပြျောတယျ။
ကိုယျ့ရဲ့ခဈြသူရှမှေ့ာဆိုရငျ ဟနျမဆောငျတတျပဲ နခေငျြသလို နတေယျ။
ပတျဝနျးကငျြမှာတယောကျယောကျကဆဲဆိုနတောမတ်တာပို့နတောကိုတှရေ့ငျ ကိုယျ့ကိုပွောနတေယျလို့ထငျပွီး ရငျတှတေုနျနတေတျတယျ။
ကိုယျရဲ့ထငျမွငျခကျြကို ရဲရဲဝငျ့ဝငျ့ မပွောရဲပါ။
ကိုယျမကွိုကျပဲ စိတျကောကျနတောကို ပွောခငျြပငျမဲ့ ပွောမထှကျတော့ ပိုပွီးဒေါသထှကျနတေတျတယျ။
ပွောပွနျတော့လညျးစကားကအရှညျကွီးဖွဈပွီးလိုခငျြတာမရောကျဖွဈနတေတျတယျ။ဘယျတော့မဆို ပထမ ဖွဈခငျြတယျ။
ကိုယျရဲ့စိတျထဲမှာ တကယျထငျတာကို မပွောရဲပါ။ပွောဖို့သတ်တိလညျး မရှိပါ။
ဘာမှမပွောပဲ ပြောကျပြောကျသှားတတျတယျ။ အရမျးသဘောကောငျးတယျ။
လိုကျနာရမဲ့ လူကငျြ့ဝတျ၊စညျးကမျးကို မလိုကျနာတဲ့သူကို အရမျးမုနျးတယျ။ အဲဒီလိုလူကို ပွောရမှာကိုလညျး အလုပျရှုပျလို့ မပွောပါ။
ပွောရငျလညျး တဈလုံးနှဈလုံးနဲ့ ပွီးသှားတတျတယျ။ နမေကောငျးလဲ ဒီအတိုငျးပဲ။ဒါပငျမဲ့ သိသာတယျ။
တဈယောကျတညျးနရေမှာကို အရမျးကွောကျတယျ။ စိတျဆိုးလာပွီဆို စကားမပွောတော့ပါ။
မကွိုကျတဲ့သူကို လုံးဝ မတှလေ့ညျးမတှခေ့ငျြ စကားလညျးမပွောခငျြပါ။
အိုသွေးလေးတွေရဲ့ လူသိနည်းသော အားသာချက်များ
အိုသွေးပိုင်ရှင်တွေဟာ သူတပါးကို ကူညီရတာကို ပျော်တယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူရှေ့မှာဆိုရင် ဟန်မဆောင်တတ်ပဲ နေချင်သလို နေတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်မှာတယောက်ယောက်ကဆဲဆိုနေတာမတ္တာပို့နေတာကိုတွေ့ရင် ကိုယ့်ကိုပြောနေတယ်လို့ထင်ပြီး ရင်တွေတုန်နေတတ်တယ်။
ကိုယ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် မပြောရဲပါ။
ကိုယ်မကြိုက်ပဲ စိတ်ကောက်နေတာကို ပြောချင်ပင်မဲ့ ပြောမထွက်တော့ ပိုပြီးဒေါသထွက်နေတတ်တယ်။
ပြောပြန်တော့လည်းစကားကအရှည်ကြီးဖြစ်ပြီးလိုချင်တာမရောက်ဖြစ်နေတတ်တယ်။ဘယ်တော့မဆို ပထမ ဖြစ်ချင်တယ်။
ကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ တကယ်ထင်တာကို မပြောရဲပါ။ပြောဖို့သတ္တိလည်း မရှိပါ။
ဘာမှမပြောပဲ ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တယ်။ အရမ်းသဘောကောင်းတယ်။
လိုက်နာရမဲ့ လူကျင့်ဝတ်၊စည်းကမ်းကို မလိုက်နာတဲ့သူကို အရမ်းမုန်းတယ်။ အဲဒီလိုလူကို ပြောရမှာကိုလည်း အလုပ်ရှုပ်လို့ မပြောပါ။
ပြောရင်လည်း တစ်လုံးနှစ်လုံးနဲ့ ပြီးသွားတတ်တယ်။ နေမကောင်းလဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ဒါပင်မဲ့ သိသာတယ်။
တစ်ယောက်တည်းနေရမှာကို အရမ်းကြောက်တယ်။ စိတ်ဆိုးလာပြီဆို စကားမပြောတော့ပါ။
မကြိုက်တဲ့သူကို လုံးဝ မတွေ့လည်းမတွေ့ချင် စကားလည်းမပြောချင်ပါ။
၀ါရငျ့ ဘောလိဝုဒျ မငျးသားကွီး ရီရှီကပူးရျ (Rishi Kapoor) ကငျဆာရောဂါဖွငျ့ကှယျလှနျ
၀ါရငျ့ ဘောလိဝုဒျ မငျးသားကွီး ရီရှီကပူးရျ (Rishi Kapoor) သညျ အိန်ဒိယနိုငျငံ မှမျဘိုငျးမွို့ ဆေးရုံတဈရုံ၌ ဧပွီ ၃၀ ရကျတှငျ ကှယျလှနျသှားခဲ့ပွီဟု သိရသညျ။ယမနျနကေ့ အခွား နာမညျကွီး ဘောလိဝုဒျ စတားမငျးသားတဈဦးဖွဈသညျ့ အီဖနျခနျး (Irrfan Khan) ကှယျလှနျခဲ့ပွီး နောကျတဈနမှေ့ာပငျ ယခုကဲ့သို့ ၀ါရငျ့ မငျးသားကွီး ရီရှီကပူးရျလညျး ကှယျလှနျခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
အသကျ ၆၇ နှဈရှိ မငျးသားကွီး ရီရှီ ကပူးရျသညျ ဟငျဒီ ရုပျရှငျလုပျငနျးကို ကာလကွာ လှမျးမိုးထားခဲ့သညျ့ ကပူးရျ မိသားစုဝငျတဈဦးလညျး ဖွဈသညျ။
၎င်းငျးသညျ ၁၉၇၃ ခုနှဈက Bobby ရုပျရှငျဇာတျလမျးတှငျ အဓိကမငျးသားနရောကနေ ပထမဆုံးပါဝငျသရုပျဆောငျပွီး စတငျလူသိမြားခဲ့သူ ဖွဈသညျ။
၎င်းငျးသညျ ဆယျစုနှဈနှဈစုကွာ အခဈြဇာတျကားအမြားအပွားတှငျ အဓိက ဇာတျကောငျနရောကနေ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့ပွီး ယငျးနောကျ အခွားသော ဇာတျကောငျစရိုကျအခနျးကဏ်ဍမြားသို့ အောငျမွငျစှာ ကူးပွောငျးသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့သူ ဖွဈသညျ။
မငျးသားကွီး ကပူးရျသညျ ၂၀၁၈ ခုနှဈက ကငျဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပွီး နယူးယော့ချတှငျ နှဈခြီနထေိုငျကာ ကုသမှုခံယူခဲ့ရပွီးနောကျ ပွီးခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာလက အိန်ဒိယသို့ ပွနျလာခဲ့သညျ။
၎င်းငျးသညျ အသကျရှုရခကျခဲသညျ့ အခွအေနမြေားပျေါပေါကျခဲ့၍ ဧပွီ ၂၉ ရကျ မနကျပိုငျးက ဆေးရုံတငျခဲ့ရခွငျးဖွဈကွောငျး ၎င်းငျး၏ အကို ရနျဟာ ကပူးရျက ပွောသညျ။
ရီရှီကပူးရျသညျ ၁၉၇၀ ပွညျ့နှဈက ၎င်းငျး၏ ဖခငျ ရာ ကပူးရျ၏ ရုပျရှငျဇာတျကားဖွဈသညျ့ Mera Naam Joker ဇာတျကားတှငျ ကလသေရုပျဆောငျအဖွဈ ပှဲဦးထှကျ ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သညျဟု သိရသညျ။
၀ါရင့် ဘောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး ရီရှီကပူးရ် (Rishi Kapoor) ကင်ဆာရောဂါဖြင့်ကွယ်လွန်
၀ါရင့် ဘောလိဝုဒ် မင်းသားကြီး ရီရှီကပူးရ် (Rishi Kapoor) သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွမ်ဘိုင်းမြို့ ဆေးရုံတစ်ရုံ၌ ဧပြီ ၃၀ ရက်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဟု သိရသည်။
ယမန်နေ့က အခြား နာမည်ကြီး ဘောလိဝုဒ် စတားမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် အီဖန်ခန်း (Irrfan Khan) ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပင် ယခုကဲ့သို့ ၀ါရင့် မင်းသားကြီး ရီရှီကပူးရ်လည်း ကွယ်လွန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ မင်းသားကြီး ရီရှီ ကပူးရ်သည် ဟင်ဒီ ရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကို ကာလကြာ လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည့် ကပူးရ် မိသားစုဝင်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်က Bobby ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွင် အဓိကမင်းသားနေရာကနေ ပထမဆုံးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ပြီး စတင်လူသိများခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုကြာ အချစ်ဇာတ်ကားအများအပြားတွင် အဓိက ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ယင်းနောက် အခြားသော ဇာတ်ကောင်စရိုက်အခန်းကဏ္ဍများသို့ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။
မင်းသားကြီး ကပူးရ်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်က ကင်ဆာရောဂါခံစားခဲ့ရပြီး နယူးယော့ခ်တွင် နှစ်ချီနေထိုင်ကာ ကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလက အိန္ဒိယသို့ ပြန်လာခဲ့သည်။
၎င်းသည် အသက်ရှုရခက်ခဲသည့် အခြေအနေများပေါ်ပေါက်ခဲ့၍ ဧပြီ ၂၉ ရက် မနက်ပိုင်းက ဆေးရုံတင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ အကို ရန်ဟာ ကပူးရ်က ပြောသည်။
ရီရှီကပူးရ်သည် ၁၉၇၀ ပြည့်နှစ်က ၎င်း၏ ဖခင် ရာ ကပူးရ်၏ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည့် Mera Naam Joker ဇာတ်ကားတွင် ကလေသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပွဲဦးထွက် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ခရီးသှားလာမှု မရှိတော့တာကွောငျ့ဂယျြလီငါးတှတေောငျ တှနေ့ရေပွီဖွဈတဲ့ ဗငျးနဈမွို့ရဲ့ အခွအေနေ
အီတလီရဲ့ Venice (ဗငျးနဈ) မွို့ဟာ ကမ်ဘာလှညျ့ခရီးသှားတှအေတှကျ အိပျ မကျမွို့တျောလို့တောငျ တငျစားလို့ရပါတယျ။အနုပညာပေါကွှယျဝပွီး ရိုမနျ့တဈအဆနျဆုံးမွို့တှထေဲကတဈမွို့လို့လညျး ဆိုရမှာပါပဲ။
အမွဲတမျးမကျြစိတဈဆုံး ခရီးသှားတှနေဲ့ပွညျ့နှကျနတေဲ့ Venice မွို့လေးဟာ ကူးစကျရောဂါကွောငျ့ လုံးဝခွောကျသှသှေ့ားခဲ့တာ တဈလကြျော နှဈလနီးပါးလောကျရှိနခေဲ့ပါပွီ။
လမျးမပျေါမှာလူသှားလူလာတှေ ရှငျးသှားတဲ့အတှကျမွို့လေးဟာတိတျဆိတျငွိမျသကျနပေါတယျ။ Venice ရဲ့ တူး မွောငျးတှဆေိုတာလညျးအရငျတုနျးက ခရီးသှားတှကွေောငျ့လှလေေးတှနေဲ့ အမွဲရှုပျယှကျခတျနရောမှအခုဆိုရငျ ရှငျး လငျးသှားခဲ့ပါပွီ။အမှိုကျသရိုကျတှလေညျးမရှိ၊လှသှေားလှလောတှလေညျး မရှိတော့တဲ့အတှကျတူးမွောငျးထဲက ရတှေဟောငွိမျသကျလို့နပွေီး တဈနတေ့ဈခွားကွညျလငျလာနတေယျဆိုတဲ့အ ကွောငျးတှလေညျးလူမှုကှနျယကျမှာ ဓာတျပုံတှနေဲ့တကှတှဖေူ့းကွမှာပါနျော။
နောကျထပျထူးခွားခကျြကတော့ တလောကမှဇီဝဗဒေပညာရှငျ Andrea Mangoni တှခေဲ့တဲ့မွငျကှငျးလေးတဈခုပါ။အဲဒါကတော့ဂယျြလီငါးလေးတဈကောငျတူးမွောငျးထဲလှတျလှတျလပျလပျ ကူးလူနတောပါတဲ့လေ။ဂယျြလီငါးလေးတှဆေိုတာရမေသနျ့ရငျတို့၊အထူးသဖွငျ့ လူတှရှေိတဲ့နရောတှဆေိုရငျမလာကွတာမြားပါတယျ
ခရီးသွားလာမှု မရှိတော့တာကြောင့်ဂျယ်လီငါးတွေတောင် တွေ့နေရပြီဖြစ်တဲ့ ဗင်းနစ်မြို့ရဲ့ အခြေအနေ
အီတလီရဲ့ Venice (ဗင်းနစ်) မြို့ဟာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားတွေအတွက် အိပ် မက်မြို့တော်လို့တောင် တင်စားလို့ရပါတယ်။အနုပညာပေါကြွယ်ဝပြီး ရိုမန့်တစ်အဆန်ဆုံးမြို့တွေထဲကတစ်မြို့လို့လည်း ဆိုရမှာပါပဲ။
အမြဲတမ်းမျက်စိတစ်ဆုံး ခရီးသွားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Venice မြို့လေးဟာ ကူးစက်ရောဂါကြောင့် လုံးဝခြောက်သွေ့သွားခဲ့တာ တစ်လကျော် နှစ်လနီးပါးလောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
လမ်းမပေါ်မှာလူသွားလူလာတွေ ရှင်းသွားတဲ့အတွက်မြို့လေးဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။ Venice ရဲ့ တူး မြောင်းတွေဆိုတာလည်းအရင်တုန်းက ခရီးသွားတွေကြောင့်လှေလေးတွေနဲ့ အမြဲရှုပ်ယှက်ခတ်နေရာမှအခုဆိုရင် ရှင်း လင်းသွားခဲ့ပါပြီ။အမှိုက်သရိုက်တွေလည်းမရှိ၊လှေသွားလှေလာတွေလည်း မရှိတော့တဲ့အတွက်တူးမြောင်းထဲက ရေတွေဟာငြိမ်သက်လို့နေပြီး တစ်နေ့တစ်ခြားကြည်လင်လာနေတယ်ဆိုတဲ့အ ကြောင်းတွေလည်းလူမှုကွန်ယက်မှာ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွတွေ့ဖူးကြမှာပစါနော်။
နောက်ထပ်ထူးခြားချက်ကတော့ တလောကမှဇီဝဗေဒပညာရှင် Andrea Mangoni တွေ့ခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုပါ။ အဲဒါကတော့ဂျယ်လီငါးလေးတစ်ကောင်တူးမြောင်းထဲလွတ်လွတ်လပ်လပ် ကူးလူနေတာပါတဲ့လေ။ဂျယ်လီငါးလေးတွေဆိုတာရေမသန့်ရင်တို့၊အထူးသဖြင့် လူတွေရှိတဲ့နေရာတွေဆိုရင်မလာကြတာများပါတယ်
ဘဝမှာ ကွုံတှနေို့ငျတဲ့ ဖကျြစရာမလိုသော မဉျြးကွောငျးမြား
တဈရကျမှာ ဆရာဖွဈသူက စာသငျခနျးထဲဝငျလာပွီး အတနျးသားတှကေို
“သားတို့ သားတို့ကို ဒီနေ့ ဘဝအတှကျအလှနျ အရေးကွီးတဲ့သငျခနျးစာတခု သငျပေးမယျ။အားလုံးငွိမျပွီး နားထောငျပေးကွပါ “လို့ပွောပွီး
ကြောကျသငျပုနျးပျေါမှာမွဖွေူနဲ့ မဉျြးဖွောငျ့တကွောငျးကိုခပျရှညျရှညျလေး ဆှဲ လိုကျပါတယျ။ပွီးတော့သားတို့”ဒီမဉျြးကို တိုသှားအောငျ ဘယျသူ လုပျနိုငျမလဲကှယျ “လို့ မေးလိုကျပါတယျ။
ခကျြခငျြးဆိုသလိုပဲကြောငျးသားတယောကျကကြောကျသငျပုနျးရှထှေ့ကျလာပွီးမဉျြးကို အလယျကနေ တဝကျလောကျဖကျြလိုကျပါတော့တယျ ။
“ဆရာအခု ဆရာဆှဲထားတဲ့မဉျြးကွောငျး တိုသှားပါပွီ ခငျဗြာလို့ပွောလိုကျပါတယျ။
ဆရာကခေါငျးကိုခါရမျးလိုကျပွီးနဂို မူလ အရှညျလောကျမဉျြးကိုပွနျပွီး ရေးဆှဲလိုကျပါတယျ။
” ဒီလိုတော့ မလုပျပါနဲ့သားရယျမဉျြးကို တိုသှားအောငျလုပျတဲ့နရောမှာ မူလ မဉျြးကို မထိခိုကျစခေငျြဘူး ”
တတနျးလုံးလညျးတျောတျောကွာကွာငွိမျနကွေပွီးနောကျကြောငျးသား တယောကျထှကျလာပွီးမူလမဉျြးနဲ့ ယှဉျလကျြပိုပွီး ရှညျတဲ့မဉျြးတကွောငျးကို ရေးဆှဲပွလိုကျပွီး
” ဆရာအခု ဆရာ့မဉျြးတိုသှားပါပွီ ခငျဗြာ “အဲဒီတော့မှ ဆရာကပွုံးပွီးအားလုံးကို “သားတို့ဒီမဉျြးကွောငျး ၂ ခု အကွောငျးဆရာသငျကွားပေးတာလေးကိုတသကျလုံး မှတျသားထားကွပါ ”
“မဉျြးရှညျတကွောငျးကို ဖကျြသလိုကိုယျထကျ သာနတေဲ့ သူတယောကျကို ဖကျြစီးတာမြိုး သားတို့ဘဝမှာမလုပျမိကွပါစနေဲ့ ”
ကိုယျက သူ့ထကျပိုသာအောငျ ကွိုးစားမယျဆိုတဲ့စိတျမြိုးကိုသာ
မှေးမွူကွပါ။ဒါမှသာသားတို့ဟာ လူ့ဘဝမှာယဉျကြေးလိမ်မာတဲ့စိတျခမျြး မွရေ့တဲ့လူသားတှဖွေဈလာမှာပေါ့
သူမြားကိုဖကျြစီးမဲ့လမျးကိုရှေးမယျဆိုရငျထိုသူဟာသမ်မတဖွဈဖွဈဝနျကွီးဖွဈဖွဈသူဌေးဖွဈဖွဈဘာသာရေးဆရာ ဖွဈဖွဈဘာကွီးပဲဖွဈနေ ဖွဈနေ
စိတျဓါတျအောကျတနျးကသြူဘဝမှာ ပြျောရှငျမှုတှဆေိတျသုနျးရသူဖွဈပွီးတမလှနျမှာရောလကျငငျးဘဝမှာပါမိမိပွုသညျ့ကံ မိမိပွနျခံစားရသူမြား ဖွဈကွမှာ စိုးရိမျမိပါတယျ ။မှတျထားကွနျော။
ဘဝမှာ ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ ဖျက်စရာမလိုသော မျဉ်းကြောင်းများ
တစ်ရက်မှာ ဆရာဖြစ်သူက စာသင်ခန်းထဲဝင်လာပြီး အတန်းသားတွေကို
“သားတို့သားတို့ကို ဒီနေ့ ဘဝအတွက် အလွန် အရေးကြီးတဲ့သင်ခန်းစာတခုသင်ပေးမယ်။အားလုံးငြိမ်ပြီး နားထောင်ပေးကြပါ “လို့ပြောပြီး
ကျောက်သင်ပုန်းပေါ်မှာမြေဖြူနဲ့ မျဉ်းဖြောင့်တကြောင်းကိုခပ်ရှည်ရှည်လေး ဆွဲ လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့သားတို့”ဒီမျဉ်းကို တိုသွားအောင် ဘယ်သူ လုပ်နိုင်မလဲကွယ် “လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲကျောင်းသားတယောက်ကကျောက်သင်ပုန်းရှေ့ထွက်လာပြီးမျဉ်းကို အလယ်ကနေ တဝက်လောက်ဖျက်လိုက်ပါတော့တယ် ။
“ဆရာအခု ဆရာဆွဲထားတဲ့မျဉ်းကြောင်း တိုသွားပါပြီ ခင်ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဆရာကခေါင်းကိုခါရမ်းလိုက်ပြီးနဂို မူလ အရှည်လောက်မျဉ်းကိုပြန်ပြီး ရေးဆွဲလိုက်ပါတယ်။
” ဒီလိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့သားရယ်မျဉ်းကို တိုသွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာ မူလ မျဉ်းကို မထိခိုက်စေချင်ဘူး ”
တတန်းလုံးလည်း တော်တော်ကြာကြာငြိ မ်နေကြပြီးနောက်ကျောင်းသား တယောက်ထွက်လာပြီးမူလမျဉ်းနဲ့ ယှဉ်လျက်ပိုပြီး ရှည်တဲ့မျဉ်းတကြောင်းကို ရေးဆွဲပြလိုက်ပြီး
” ဆရာအခု ဆရာ့မျဉ်း တိုသွားပါပြီ ခင်ဗျာ “အဲဒီတော့မှ ဆရာကပြုံးပြီးအားလုံးကို ” သားတို့ဒီမျဉ်းကြောင်း ၂ ခု အကြောင်းဆရာ သင်ကြားပေးတာလေးကိုတသက်လုံး မှတ်သားထားကြပါ ”
” မျဉ်းရှည်တကြောင်းကို ဖျက်သလို ကိုယ်ထက် သာနေတဲ့ သူတယောက်ကို ဖျက်စီးတာမျိုး သားတို့ဘဝမှာ
ကိုယ်က သူ့ထက်ပိုသာအောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကိုသာ မွေးမြူကြပါ။ဒါမှသာသားတို့ဟာ လူ့ဘဝမှာယဉ်ကျေးလိမ္မာတဲ့စိတ်ချမ်း မြေ့ရတဲ့လူသားတွေဖြစ်လာမှာပေါ့
သူများကိုဖျက်စီးမဲ့လမ်းကိုရွေးမယ်ဆိုရင်ထိုသူဟာသမ္မတဖြစ်ဖြစ်ဝန်ကြီးဖြစ်ဖြစ်သူဌေးဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးဆရာ ဖြစ်ဖြစ်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေ ဖြစ်နေ
စိတ်ဓါတ်အောက်တန်းကျသူဘဝမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေဆိတ်သုန်းရသူ ဖြစ်ပြီးတမလွန်မှာရောလက်ငင်းဘဝမှာပါ
မိမိပြုသည့်ကံ မိမိပြန်ခံစားရသူများ ဖြစ်ကြမှာ စိုးရိမ်မိပါတယ် ။မှတ်ထားကြနော်။